International Employment magweta muNetherlands - Law & More
MUMWE MURAIRIDZI WEBANKRUPTCY
CHIKwereti CHINOTUNGAMIRIRA GWEDZI
MHURI DZESVONDO DZESVONDO
KUENDA KWENYIKA- & GWEDHI REKUENDA KUGARA
CHIMWE CHINHU CHINOKOSHA (IP) GWAYERI
MERGERS & ZVINOGONESESA
PHILANTHROPY & CHARITY NZVIMBO
REAL ESTATE GWAYERI
MUMWE MURAIRIDZI WEBHizimisi
EURASIA & CIS DESIKI
PHARMA & HUPENYU SAYENZI
NETHERLANDS DUTCH BAR KUSANGANA
PASI PASI MUBVUNZO
KUNYORA ZVINHU ZVINOKOSHA
Mutemo wevashandi inzvimbo yakawedzera yemutemo. Kodzero uye zvisungo zvinodzorwa mumatare zvibvumirano zvebasa, mitemo yebasa, zvibvumirano zvakabatanidzwa, mutemo uye kutonga. Magweta emabasa e Law & More vanokwanisa uye vanoziva mutemo wezvino uye kutonga.
ZVINODAIWA MUTEMO WEMAHARA?
Bvunza CHEMA REMAHARA
> Zano repamutemo
> Inoshanda, Yakwanira uye Transparent
> Hapana-kusava nepfungwa
Nyaya dzemitemo yebasa dzinowanzove nemhedzisiro inosvika kure kune vashandirwi nevashandi. Ndokusaka zvichikosha kuti iwe ubatsirwe nehunyanzvi uye neruzivo mutemo mutemo gweta. Mushure mezvose, zano rakanaka repamutemo pamusoro pemutemo wevashandi pamberi rinogona kusarudza ramangwana. Nehurombo, kusawirirana hakugone kudzivirirwa nguva dzose, semuenzaniso muchiitiko chekudzingwa, kugadzirisazve kana kusavapo nekuda kwehurwere. Iyi mhando yemamiriro ezvinhu haina kufadza uye inokanganisa uye inogona kukanganisa hukama hwebasa pakati peiye mushandirwi nemushandi. Kana iwe uchinetseka nemhirizhonga yebasa, Law & More ichafara kukubatsira iwe kutora matanho akakodzera.
Law & More inopa rubatsiro kumabhizinesi, vamiriri vemitemo, vashandirwi nevashandi mundima yemutemo wevashandi. Boka redu rinopa zano repamutemo uye rinozoraira kana zvichikosha.
Mienzaniso yenyaya dzatinoda kukubatsira iwe:
• kunyora nekuongorora zvibvumirano zvevashandi vevoga uye pamwe chete;
• kubviswa kwezvibvumirano zvevashandi nevashandi;
• rubatsiro pamakakatanwa emabasa
• kuiswa kwefaira revashandi
• kudzinga maitiro
• nyaya dzine chekuita nemubairo
• nyaya dzine chekuita pamwe zvibvumirano
• zororo uye kuenda
• kurwara uye kudzokerwazve
• kushandira pamwe
• mutoro wevashandirwi nevashandi.
Fona +31 (0) 40 369 06 80
Magweta edu akagadzirira imi
"Law & More Magweta
inogona kunzwira tsitsi
dambudziko remutengi ”
Sewe mushandirwi, unosangana nenyaya dzemabasa emabasa zuva nezuva. Iwe unofanirwa kuverengera zvibvumirano zvebasa, unosangana nevashandi vekushanda kana varwere uye mhirizhonga yevashandi kana kambani yako ingangofanirwazve kuronga nekuda kwekuchinja kwemamiriro emusika. Iwe unoziva chaizvo izvo kodzero dzako uye zvaunosungirwa kuita? Chero chipi chaunosangana nacho, tichafara kukubatsira. Mushure mezvose, chirongwa chakanaka chemutemo wevashandi chakakosha kune kambani ine hutano.
Semushandi, iwe uchafanirwa kutevedzera mutemo wevashandi, wese wakumbirwa uye usina kubvunzwa. Funga nezve kubvuma uye kusaina chibvumirano chevashandi, chisungo chemakwikwi uye kodzero dzako nezvisungo zvako kana paine chirwere uye kudzingwa. Tichafara kukubatsira iwe nezve chero mutemo wezvemutemo nyaya yaunoda kubatsirwa nayo.
Inoshanda, Yakwanira uye Transparent
Kunze kwekupi zano reunyanzvi, iwe unodawo kuwana nekukurumidza zano repamutemo. Isu tinoziva izvi uye tinoshandiswa kushanda nekukurumidza uye chaizvo. Tine chokwadi chekuti isu tiri nyore kusvika uye tinokurumidza kukupa iwe zano rinoshanda uye nehunyanzvi. Unogona kuvimba nesu kuti tipe zano rakapfava uye rakajeka.
Mashandiro atinoita ari pachena uye mhinduro-yakatarisana. Isu tinopinda mukukurukura newe kuti tikurukure nyaya yako, zvido zvako, mvumo yemutemo uye mufananidzo wezvemari. Isu tinobva taona zano rechokwadi mukutaurirana newe. Nhanho yega yega inokurukurwa newe, kuti urege kuzotarisana nezvimwe zvinoshamisa.
Isu tinoda yekusika kufunga uye tinotarisa zvinopfuura zvemutemo mamiriro ezvinhu. Izvo zviri nezve kusvika kumucheto wedambudziko uye kuzvibata icho mune chinhu chakatemwa. Nekuda kwekusafunga-kwekusagadzikana mafungiro uye makore echiitiko vatengi vedu vanogona kuvimba neiwo pachako uye anoshanda emutemo rutsigiro.
Iwe unoda kuziva chii Law & More anogona kukuitira iwe semutemo femu muEindhoven?
Wobva watibata parunhare +31 40 369 06 80 kana tumira e-mail ku:
mr. Tom Meevis, mumiriri pa Law & More - [email inodzivirirwa]
Mr. Maxim Hodak, mutsigiri pa & Zvimwe - [email inodzivirirwa]
LAW & MORE
Hofisi Yezvichemo Maitiro
De Zaale 11
E. [email inodzivirirwa]
T. + 31 40 369 06 80
1081 KL Amsterdam
T. + 31 20 369 71 21
Copyright © 2021 Law & More B.V.
Ridza pinda kutsvaga kana ESC kuvhara
Law & More B.V.